Hanamboarantsika tetezana fly over eo Ampasika hamahana ny olan'ny fitohananan'ny fiara ety Itaosy.
Hitako fa efa vonona hiatrika ny fihodinana faharoa ianareo. Natoky ahy ianareo teo aloha ary matoky anareo hatrany aho. Ary ny fifampitokisana sy ny fitiavana no handresentsika sy hahatontosa ireo vinantsika. Izay lazaiko tsy maintsy tanterahiko.
Voaporofon'izao fahatongavanareo marobe eto izao indray fa tsy niova ny fitiavan'i Toamasina ahy.
Ny fitiavako anareo ihany koa dia vao mainka mitombo. Tsy maintsy tontosantsika ireo velirano nataoko taminareo.
Tsy naman'izay tsy tia fandrosoana isika, tsy miaraka amin'izay tsy manana vina. Satria isika dia sahy, mavitrika ary vonona.
"Ny tso-drano zava-mahery.Lehibe sy masina ny adidy raisiko sy ho tontosaiko hampandroso ny tanindrazantsika.Mankasitraka anareo ampanjaka avy amin'ny tranobe 12 aho. Tsara tso-drano isika ka ho lasa lavitra ary ho lohany i Madagasikara.Mariky ny fankasitrahako anareo, ho averiko ho faritra i Mananjary ary hamboarina ny tetezana ao Anjilanjila.Fitia mifamaly ny antsika..."
Hamaritra ny tantara isika.
Kandida tokana, izaho, Andry Rajoelina irery no vonona , mahafoy tena ary sahy manao velirano.
Asehoko anareo ny bileta tokana hanampianareo ahy hanavotra an'i Madagasikara amin'ny 19 desambra.
Dieny izao, manolotra bisikilety 40 isa hanampiana ireo pretra aty aho.
Efa roso isika, efa mpandresy !
Raha tonga aty Vangaindrano aho dia nofidiako manokana ianareo eto Matanga.
Mamokatra jirofo betsaka ianareo. Saingy mitaintaina noho ny tsy fandriampahalemana.
Ho ampitombointsika ireo tovolahy horaisina ho mpitandro filaminana eto.
Hifampiaro ianareo, hilamina i Matanga ary hamokatra tsy amin'ahiahy ianareo mponina.
Tsy ho farany fa ho isan'ny lohany i Madagasikara. Mino izany aho amin'izao fahitako anareo marobe sy feno tsiky eto Tsararafa izao.
Porofom-pitiavana izao. Fitiavako anareo sy fitiavanareo ahy.
Koa tsy hisy haharesy antsika. Satria ny fitiavana no lehibe indrindra.